သာသနာ | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Tag Archives: သာသနာ
ရုပ်နာမ်ဟာဆင်းရဲပါတယ် ရုပ်နာမ်ဟာဆင်းရဲပါတယ်၊ ဒါကို ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း သိထားပြီးသားပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ရုပ်နာမ်ချုပ်ရာ နိဗ္ဗာန်ကို စံချင်ကြတာပေါ့။ ဒါလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း သိပြီးသားပါ။ တစ်ချို့က ဘာဖြစ်လို့ ခေတ်နောက်ပြန် ဆွဲနေကြတာလည်း။ ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ စကားကို နားယောင်တာနဲ့တူတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကြည်ညိုရင် မြတ်စွာဘုရား အဆိုအဆုံးအမအတိုင်း လုပ်ပါ။ ရုပ်နာမ်ကို ချုပ်စေခဲ့ပါ – နိဗ္ဗာန်ကို စံဝင်ပါ အပြီးအပိုင်လွတ်မြောက် မှုကိုရယူပါ။ ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်ထဲကို ရုပ်နာမ်ခေါ်ချင်တယ် ဆိုတာကတော့ တော်တော်မတရားတဲ့ စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သာသနာဖျက် စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, သင်္ခတ, သံသရာ, သာသနာ, မြတ်စွာဘုရား	| Leaveacomment
နိဗ္ဗာန်အကြောင်း နိုင်ငံခြား စာအုပ်တစ်အုပ် ဖတ်ကြည့်ရာ နိဗ္ဗာန်အကြောင်း ရေးထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့ဘက်မှလည်း နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကို ရေးရန်ဆန္ဒပေါ်လာသည်။ နိဗ္ဗာန်သည် (၃၁) ဘုံမှ လွန်ရာဖြစ်သည်။ နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကို ခြေလျှင်သွားကြည့်၍တော့ မရနိုင်၊ လောကအဆုံးသို့ ခြေလျှင်သွား၍ မရနိုင်ကြောင်း မြတ်စွာဘုရားသည် အသေအချာ အတိအလင်း ဟောတော်မူ ခဲ့သည်။ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်နှင့် သွားရမည်။ ဤကိစ္စကို အချို့နားမရှင်း ဖြစ်နေကြသည်။ သိသည်ဆိုလျှင် စိတ်ရှိသည်ဟု တွက်သည်။ ယင်းသို့ တွက်ခြင်းသည် မှားယွင်းနေသည်။ သိသည်ဆိုသည်မှာ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, သာသနာ, အရိယာ, မြတ်စွာဘုရား	| Leaveacomment
ဆုတ်ယုတ်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ .. .. တိုးတက်တဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ဆုတ်ယုတ်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကြားနေရတယ် .. .. ဒီခေတ်ကြီးက တိုးတက်နေတာ အားရစရာလည်း တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ အားကစားဆို အားကစားမို့၊ ကွန်ပြူတာဆို ကွန်ပြူတာမို့၊ အနုပညာဆိုလည်း အနုပညာပေါ့လေ၊ စီးပွားရေးဆိုလည်း စီးပွားရေး၊ သိပ္ပံ ဆိုလည်း သိပ္ပံ အစစအရာရာ တိုးတက်နေတာ ဒီခေတ်ကြီးပါ။ တိုးတက်အောင်လည်း ကြိုးစားကြတယ်။ လက်တွေ့လည်း လုပ်ကိုင်ကြတယ်။ ဇွဲသတ္တိလည်း ရှိကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဆုတ်ယုတ်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ ဘောက်ချီးတွေ ကြားလာရတာ တော်တော်အံချော်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေပဲ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ပါရမီ, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်, ရဟန္တာ, သာသနာ, မြတ်စွာဘုရား	| Leaveacomment
နိဗ္ဗာန် အပိုင်း(၃) ငယ် မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်အကြောင်း အနည်းငယ် ပြောကြည့်ချင်တယ်ဗျာ။ နန်း ပြောကြည့်ဗျာ။ ငယ် တကယ့်မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်ဆိုတာ လောကုတ္တရာနဲ့ ယှဉ်တယ်။ နန်း ဒီတော့ ! ငယ် လောကုတ္တရာနဲ့ ယှဉ်တယ်ဆိုတော့ လောကီမှလွန်ရာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော် ခဏခဏ ပြောနေတယ်။ အပျက်မှ လွန်ရာဖြစ်တယ်။ နန်း ဒါသိတယ်လေ။ ငယ် အပျက်မှလွန်ရာဆိုတော့ ခန္ဓာမှ လွန်ရာဖြစ်တယ်။ စိတ်မှ လွန်ရာဖြစ်တယ်။ နန်း ဒါ့ကြောင့် ! ငယ် ဒါ့ကြောင့် ဖိုလ်ဉာဏ်နဲ့ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, သဥပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်, သာသနာ, အတ္တ, အနုပါဒိသေသ နိဗ္ဗာန်, လောကီ, မြတ်စွာဘုရား	| Leaveacomment
ကမ္ဘာသို့သာသနာပြုသောအခါ ယခုအခါ သာသနာအတွက် စေတနာထားသောပုဂ္ဂိုလ်များ ပေါ်ထွန်းလျှက် ရှိနေသည်။ ယင်းစေတနာသည် လွန်စွာမှ မွန်မြတ်သော စေတနာဖြစ်လေသည်။ သို့သော် ကမ္ဘာကို သာသနာပြုရာတွင် ကြိုတင်သိရှိထားရန် အချက်အလက်အချို့ရှိပေသည်။ ၄င်းတို့မှာ … ၁) ကမ္ဘာသည် ရှေ့နောက်မညီညွတ်သောအသုံးအနှုန်းကို လက်မခံပါ။ ဥပမာအားဖြင့် —- နိဗ္ဗာန်၌ ရုပ်နာမ်မရှိဟု စောစောပိုင်းက အဆိုပြုပြီး၊ နောက်ပိုင်း၌ နိဗ္ဗာန်၌ရုပ်နာမ်ရှိ၏ဟု အဆိုပြုလျှင် ယင်းအဆိုများသည် ရှေ့နောက်မညီညွတ်ကြပါ။ ၄င်းကဲ့သို့ ရှေ့နောက်မညီညွတ်သော အဆိုအပြုများကို ကမ္ဘာကအလွယ်တကူ လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့၏စကားအရ (non-contradictory character) … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, ဗုဒ္ဓဘာသာ, သာသနာ	| Leaveacomment